အင်္ဂလိပ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထူးထူးဆန်းဆန်း, ထူးခြားဆန်းပြားလိမ္မော်ရောင်ငှက်ဟင်းထဲမှာစိမ်နေတဲ့ပင်လယ်ဇင်ယော်ဖြစ်ထေူ - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ BGR - "အင်္ဂလိပ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထူးဆန်း, ထူးခြားဆန်းပြားလိမ္မော်ရောင်ငှက်ဟင်းထဲမှာစိမ်နေတဲ့ပင်လယ်ဇင်ယော်ဖြစ်ထေူ
BGR - အင်္ဂလိပ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထူးထူးဆန်းဆန်း, ထူးခြားဆန်းပြားလိမ္မော်ရောင်ငှက်ဟင်းထဲမှာစိမ်နေတဲ့ပင်လယ်ဇင်ယော်ဖြစ်ထေူ
Tele RELAY တစ်ခု 8 ဇူလိုင်လ 2019
သငျသညျလမ်းဘက်မှာနေတဲ့တောက်ပတဲ့လိမ္မော်ရောင် glaze ငှက်ကိုမြင်ရလျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းက hallucinogenic ပစ္စည်းဥစ္စာမဆံ့မပါဘူးသေချာစေရန်နှစ်ဆယူလုပ်ပေးနှင့်သင့်ကော်ဖီစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်တဲ့မော်တော်ကားမကြာသေးမီကထိုကဲ့သို့သောငှက်ပြောက်နှင့်သတ္တိကယ်ဆယ်ရေးချဉ်းကပ်နေကြသည်ပြီးနောက်, ငှက်ဆှဲနှင့်ဒေသခံမန်များများအတွက်ဆေးရုံကိုသူ့ကို ယူ. ရပြီအဲဒါကိုပိုကောင်းရက်ပေါင်းမြင်ခဲ့ပြီးသောရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည် ။
အဘယ်သူမျှမထူးခြားဆန်းပြားမျိုးစိတ်။ ဒါဟာဟင်းရေချိုး၏မှားယွင်းတဲ့အဆုံးမှာခဲ့သူကိုဖွင့်ထားတဲ့သာမန်ပင်လယ်ဇင်ယော် ... ခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့, တကစပ်ငှက်ဖြစ်ပါတယ်။
"သူတို့ကလိမ္မော်ရောင်ငှက်ကောက်ယူခဲ့သောပြောကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့မျှော်လင့်သောအရာကိုမသိခဲ့ပါ! - နဲ့ကျွန်တော်မှန်းဆကြတာပါ" ၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ Facebook ပေါ်မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက် Tiggywinkles တောရိုင်းဆေးရုံ Says ဒီထူးဆန်းတဲ့ငှက်။
"ဒါဟာဖုံးလွှမ်းဟင်းသို့မဟုတ်နနွင်း၏မျိုးပဲ! အရာအားလုံးသူမ၏အတောင်ပံပေါ်ခဲ့သည့်ယင်ကောင်စနစ်တကျတားဆီး "ဟုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်။ "ကျနော်တို့ကကျန်းကျန်းမာမာကြီးကံကောင်းထောက်မစွာ, ဆိတ်ကွယ်ရာသည်၎င်း၏တက်ကြွအရောင်နဲ့အနံ့အနံ့ကနေသူဒီအခြေအနေကိုသို့ရတယ်ဘယ်လောက်မှာအားလုံးသိကြပေမယ့်မရကြဘူး။ "
ငှက်ပထမပုံမှာအပေါ်အထူးသဖြင့်ကျေနပ်မကြည့်ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးအမြန်ရေချိုးရရှိသွားတဲ့နှင့်မကြာမီစပ်အပေါ်ယံပိုင်း၏ချွတ်ခဲ့သည်။ သူဟာခိုင်မာဖြစ်လာခဲ့သောအတွက် Vindaloo ဟင်း၏ဂုဏ်အသရေရှိ "Vinnie" ချစ်စနိုးခဲ့သည်။
အဆိုပါသတ္တဝါသည်၎င်း၏တောက်ပသောလိမ္မော်ရောင်အသှငျအပွငျ မှလွဲ. ပုံကျန်းမာကြီးနှင့်၎င်း၏အမှုကိုဆောင်သောသူတို့သဘာဝမကြာမီသူ့ကိုလွှတ်ပေးရန်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ။
PHOTOS - "ကျွန်း 2019 ဇီဝဗေဒ": ကမ္ဘာ၏သိပ္ပံပညာရှင်များရီရူနီယန်ကိုသိမ်းယူပြီး
ငါးဖမ်းသမားနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များရေကန် Winnipeg အတွက် walleye ၏နံပါတ်ပေါ်ယှဉ်ပြိုင်